Xadgudubyada kombiyuutarka | Somaliska
Ku xadgudubka qaanuunka shebekadda kombiyuutarka oo inta badan waxba laga qaban. Dhibbane yaasha dacwada ka soo oogay ayaa gaara haye 11.000 kun oo ruux, waxaana maxkamadu u yeertay oo kaliya 200 oo ruux, taas oo aad u yar marka labarbar dhigo xadgudubyada layskugu geeysto qololka shebekadda kombiyuutarka. Dadyoowga dacwoonaya ee ka cabana haya falalka sharci darro ee loogu geeysto shebekadda kombiyuutarka ayaan inta badan booliisku iyo qareen kuba xooga saarin hadii aysan ka yareen 18-deed jir taas waxaa sheegay, Anders Alkvist, oo ah ku simaha madaxa It.dhanka danbi baarista Sveriges Radio.
Ku xadgudubka qaanuunka shebekadda kombiyuutarka oo inta badan waxba laga qaban.
Dhibbane yaasha dacwada ka soo oogay ayaa gaara haye 11.000 kun oo ruux, waxaana maxkamadu u yeertay oo kaliya 200 oo ruux, taas oo aad u yar marka labarbar dhigo xadgudubyada layskugu geeysto qololka shebekadda kombiyuutarka.
Dadyoowga dacwoonaya ee ka cabana haya falalka sharci darro ee loogu geeysto shebekadda kombiyuutarka ayaan inta badan booliisku iyo qareen kuba xooga saarin hadii aysan ka yareen 18-deed jir taas waxaa sheegay, Anders Alkvist, oo ah ku simaha madaxa It.dhanka danbi baarista